ဝီကီပီးဒီးယား:Requests for adminship/မော်ကွန်း ၃ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝီကီပီးဒီးယား:Requests for adminship/မော်ကွန်း ၃
< ဝီကီပီးဒီးယား:Requests for adminship
၁ Request for Adminship of mywiki
၁.၁ Ninjastrikers (User:Ninjastrikers)
၁.၂ Ninjastrikers (User:Ninjastrikers) 2
၁.၃ Dr Lotus Black (User:Dr_Lotus_Black)
၂ Removal of access
Request for Adminship of mywikiပြင်ဆင်
အောက်ပါဆွေးနွေးချက်သည် ပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ နောက်ဆက်တွဲ သုံးသပ်ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာတွင်သာ ရေးသားပါ။ ဤဆွေးနွေးချက်တွင် နောက်ထပ် မည်သည့်ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်မှုကိုမျှ မပြုလုပ်သင့်ပါ။
I request for admin access in Myanmar Wikipedia. Here in mywiki, configurations are out of date to add new features. I want to maintain and add some features to mywiki like WikiMiniAtlas and more. You can check my contributions for mywiki here. Ninja✮Strikers «☎» ၁၂:၂၅၊ ၃ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၆ (UTC)
Support: I highly support his request as adminship in mywiki. He is the most active member i ever seen in mywiki. Dr Lotus Black (talk) ၁၂:၅၉၊ ၃ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၆ (UTC)
Strong Support: I strongly support Ninjastrikers request for adminship. He hasalot of contributions in Wikipedia and he spendalot of time for improvement of Myanmar Wikipedia. Zawthet (talk) ၁၈:၁၈၊ ၃ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၆ (UTC)
Strong support: He is the most active wikipedian of 2015 and has good knowledge of maintainance tasks, revert vandalism using Twinkle, and can use AWB, Cat-a-lot and so on. ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၀၀:၀၉၊ ၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၆ (UTC)
Strong support: I also strongly support his admin request. MoeZawSoe (talk) ၁၅:၄၉၊ ၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၆ (UTC)
အထက်ပါ ဆွေးနွေးချက်သည် ပိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ နောက်ဆက်တွဲ သုံးသပ်ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာတွင်သာ ရေးသားပါ။ ဤဆွေးနွေးချက်တွင် နောက်ထပ် မည်သည့်ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်မှုကိုမျှ မပြုလုပ်သင့်ပါ။
Ninjastrikers (User:Ninjastrikers) 2ပြင်ဆင်
My admin rights will be expired on 10 April 2016. During these3months, I believe I had madealot of improvement and maintenance to this wiki. I would like to request for permanent admin rights on this time to continue working for the betterment of the project. Thanks. Ninja✮Strikers «☎» ၀၄:၀၃၊ ၃၁ မတ် ၂၀၁၆ (UTC)
Strong Support: I strongly support Ninjastrikers request for adminship. He hasalot of contributions in Wikipedia and he spendalot of time for improvement of Myanmar Wikipedia. Phoenix06 (ဆွေးနွေး) ၀၄:၁၈၊ ၃၁ မတ် ၂၀၁၆ (UTC)
Strong Support: I strongly support permanent adminship request of Ninjastrikers. He hasastrong track record of contributions to Myanmar Wikipedia and we need his continuous contributions. Zawthet (ဆွေးနွေး) ၀၄:၂၅၊ ၃၁ မတ် ၂၀၁၆ (UTC)
Highly Support: I have seen what he did and what he could during those days. I have no doubt that he should be parmanent admin of this wiki and there is no any piece of reason that he shouldn't get that right. For Myanmar wiki shake; please give him adminship right for good. Thanks. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၄:၃၂၊ ၃၁ မတ် ၂၀၁၆ (UTC)
Strong Support: Yes, We need active admin like him. Aunghtike (ဆွေးနွေး) ၀၄:၃၄၊ ၃၁ မတ် ၂၀၁၆ (UTC)
Strong Support: I strongly support permanent adminship request of Ninjastrikers. He demonstrates his excellent skills and ability in Myanmar Wikipedia. ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၀၅:၂၇၊ ၃၁ မတ် ၂၀၁၆ (UTC)
Strong Support: I strong support his permanent admin request. MoeZawSoe (ဆွေးနွေး) ၁၆:၂၆၊ ၅ ဧပြီ ၂၀၁၆ (UTC)
Dr Lotus Black (User:Dr_Lotus_Black)ပြင်ဆင်
According to the policy, my adminship will be expired on 26 Dec 2016. Last time i checked, there were only2active admins in Myanmar Wikipedia. So, please vote me again for becoming sysop, maybe permanent? Thanks. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၃:၁၆၊ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)
Strong Support: I strongly support permanent adminship request of Dr Black. ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၁၃:၃၁၊ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)
Strong Support: I strongly support for his permanent adminship request. Myanmar Wikipedia needs active admin like him. Ninja✮Strikers «☎» ၁၃:၅၇၊ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)
Strong Support: I supportalot DrLotusBlack, I think he helpsalot in this wiki.--MASTER+MATES (ဆွေးနွေး) ၁၄:၀၄၊ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)
Strong Support : I support the permanent adminship request of Dr Lotus Black strongly. Zawthet (ဆွေးနွေး) ၁၉:၅၉၊ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)
Strong Support : I support the permanent adminship request of Dr Lotus Black strongly.Mayor mt (ဆွေးနွေး) ၂၂:၅၅၊ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)
Strong Support : I support the permanent adminship request of Dr Lotus Black strongly. D.Lynn (ဆွေးနွေး) ၀၈:၂၆၊ ၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)
Granted from Meta-Wiki, without expiry. Ajraddatz (ဆွေးနွေး) ၂၂:၅၁၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)
Removal of accessပြင်ဆင်
He described his account has been hacked. () And no admin action for7years. No article/mainspace edit for7years. So, I'd like to propose to revoke adminrights of User:Kyawgyi.
Admin stats of mywiki since 2010
User Kyawgyi's contributions on mywiki
I sentanotification about this on his user talk page. Ninja✮Strikers «☎» ၁၃:၄၆၊ ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
Should remove his account from admin access ASAP. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၅:၃၁၊ ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
Strong support: No admin action for7years, so admin rights are not needed. He failed to report after noticing unauthorized use of his account or otherwise neglected account security practices. This user does not understand clearly what an admin is not.  . So his user right should be revoked. --ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၁၅:၄၀၊ ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
This user had no enough actions for the improvement of Myanmar Wikipedia. Should remove him from admin user. ခင်မောင်မောင်လွင် (ဆွေးနွေး) ၁၆:၄၃၊ ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
How make you say my account that (( account has been hacked )) ? Someone trying to hack, but never get hacked! I called Telenor and problems sloved! I don't see any change with Burmese mind sets, STILL FIGHTERS. We need more and more Admins, Bots, Stewards, Users, ... but nothing to do and deal with someone already has Admin, Bot and Steward rights. Be positive my friends. I'll do something soon. Cheers! kyawgyi
With all due respect but you should make yourself familiar to Wikipedia community consensus and discussion rather than criticising other active admins and users. It is notagood idea to criticise about Burmese mind sets in Wikipedia talk page per Wikipedia guidelines. All admins should familiar to Wikipedia policy, guidelines and what an admin is. It is safe to asume that you do not need this rights per your user logs. You can re-request this user right again if you needed later. Thank you. --ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၀၄:၁၁၊ ၁၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
I respects all of the Myanmar Wikipedians. I believes that this request doesn't include any personal case. My support is only to improve Myanmar Wikipedia. ခင်မောင်မောင်လွင် (ဆွေးနွေး) ၀၆:၀၄၊ ၁၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားမှာ အသုံးပြုသူတွေ၊ ဘော့တွေ၊ အက်ဒမင်တွေ အများကြီးလိုအပ်တာမှန်ပေမယ့် အက်ဒမင်အဆင့်ရရှိသူများအနေနဲ့ မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားမှာ အခါအားလျော်စွာ တည်းဖြတ်မှုတွေ၊ ဝင်ရောက်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Admin activity review policy အရ အက်ဒမင်အဆင့်ရရှိထားပြီး နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ အက်ဒမင်လုပ်ငန်းစဉ်များ လုံးဝ ဆောင်ရွက်ထားခြင်းမရှိရင်၊ ဒါမှမဟုတ် active မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် အက်ဒမင်အဆင့်ကနေ ဖယ်ရှားနိုင်ကြောင်း သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒီမူဝါဒမှာ administrators, bureaucrats, oversight, checkusers, stewards rights ရရှိပြီးသူများအားလုံးအတွက် အကျုံးဝင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် အစ်ကို့အနေနဲ့ အဲဒီမူဝါဒနဲ့ ကိုက်ညီနေတယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် ကျွန်တော့အနေနဲ့ ဒီဆွေးနွေးချက်ကို စတင်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိကာလမှာ အက်ဒမင်အဆင့်ကနေ ဖယ်ရှားခံရပေမယ့် နောင်တစ်ချိန်မှာ လိုအပ်ခဲ့ရင် အခုလိုမျိုး အများသဘောဆန္ဒနဲ့ ပြန်လည် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၅:၀၉၊ ၁၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
If you are interested in and talking about Admin activity, Did you ever check the admin score ranking? I always checking my score that NO.1 until 2015 without user:Hintha in Admin Group but second in now, user:Ninjastrikers after you . Do you guys know sad story about user:Hintha ? His score is ( 722 EN 561 MY ) the best ever, wasasysop at Myanmar Wiki! I was so sad when he stepped down fromasysop. Please invite him, back to beasysop? Be positive, contribute more and learn more before you guys criticize somebody else, please! Thanks kyawgyi
ဒီနေရာမှာ ဝီကီပီးဒီးယားရဲ့ Community consensus သဘောသဘာဝကို အစ်ကို့အနေနဲ့ သေချာနားမလည်သေးဘူးနဲ့ တူပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ user rights ရပြီးသားသူကို ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးလို့ ဆိုထားလို့ပါ။ ဝီကီပီးဒီးယားဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ သဘောထားနဲ့ ကြိုက်သလိုနေ ကြိုက်သလိုပြုမူလို့ရတဲ့ နေရာမဟုတ်ပါဘူး။ လိုအပ်ရင် အသုံးပြုသူတွေဆီကနေ ဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ သဘောထားမှတ်ချက်ကောက်ယူပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်ပါတယ်။ အက်ဒမင်အဆင့်ကို ရယူထားပြီး အက်ဒမင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ဆောင်ရွက်ထားခြင်း မရှိသလို အခြားသိသာတဲ့ တည်းဖြတ်မှုတွေ မရှိတဲ့ အက်ဒမင်တစ်ဦးရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းဖို့ အခြားဝီကီအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ တောင်းဆိုခွင့်/ဆွေးနွေးခွင့် ရှိပါတယ်။ အက်ဒမင်လုပ်ငန်းစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့သူဟာ သာမန်အသုံးပြုသူအဆင့်နဲ့ လုံလောက်ပြီး အက်ဒမင်အဆင့်ကို သူ့အတွက် မလိုအပ်ဘူးလို့ပဲ ယူဆပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၅:၂၄၊ ၁၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
You don't understand/follow what I am talking about! You better look at and research other language versions, here is English Version Wiki at ADMIN STATS, Current Admins 1,243, Admins without action 312. I could not digging 10 years like Myanmar Wiki because ofalot of data, errors came out. I digged 731 days and that kind of results came out. Don't use your energy to kick me out as admin in here, you've to use your energy to get more Admins, Bureaucrats, Bots, Stewards... Show me your ability GET JUST only5more admins? Then, Total Admin will be 10 in Myanmar Wiki! Will you? Be Positive!
By the way, I am online at least 60hour / week, we used to say
"Arguing with an engineer is like mud wrestling withapig. Afteracouple of hours, you realize the pig likes it" .
I am trying to get 30,000 followers these days in Twitter @Naypyidaw Trying hard for years, but 29,086 followers today.
I would like to know what you guys are thinking about Wikipedia. Please answer the questions below. You guys can send me an email too. <realburmese@gmail.com>
Why you join Wikipedia?
Is Wikipedia related to your offline life? Wikipedia related to your work or your life?
How much time will you spendatypical week in solving controversy?
Do you have the chief of Wikipedia?
Does anyone tell?
What is the controversial example you dealt with?
What is the controversial example you feel treated well?
What controversial example feels you were not dealt with well?
What isacontroversial case in which an individual threatened or tookalawsuit?
In the solution controversy, is it appropriate to give more weight to the new or older members of the Wikipedia community?
In that case, why? In the controversy, feel the minor members rather than the more resonance of the major members of the Wikipedia community?
Binding arbitration system as adopted by English version of Wikipedia Degree (We resolve conflict by arbitration rather than trial, and arbitration judgment is Do you think that it is necessary to adoptasystem that binds people? Then, why?
What are the advantages of Wikipedia's dispute settlement process?
Kyawgyi (ဆွေးနွေး) ၂၀:၁၈၊ ၁၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
Thank you for your reply, bro. I will give the answers of above questions on your talk page withinaweek. And, let me ask some questions. First, what is the reason for you being an admin on mywiki? Second, is there any significance contribution to mywiki after being as an admin? အစ်ကို့အနေနဲ့ မြန်မာဝီကီမှာ error တွေ ရှိနေတာ သိရက်နဲ့ ဘာကြောင့် ဖြေရှင်းဖို့ မလုပ်ဆောင်ခဲ့တာလဲဗျာ။ မြန်မာဝီကီမှာ အသုံးပြုသူပိုပြီး များလာလေလေ ကျွန်တော်တို့က ပိုပြီး ကျေနပ်လေလေပါ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာဝီကီကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင် သိသာထင်ရှားတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုမရှိ၊ community consensus, community discussion အကြောင်း မသိတဲ့ အသုံးပြုသူ (အထူးသဖြင့် အက်ဒမင်အဆင့်ရရှိထားသူ) ကိုတော့ မြန်မာဝီကီကို စီမံခန့်ခွဲခွင့် ပေးဖို့ရာ ဝန်လေးပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဝီကီတစ်ခု (အထူးသဖြင့် အသုံးပြုသူနည်းပါးတဲ့ ဝီကီ) မှာ အရေးပါတဲ့ မူဝါဒတစ်ခုခု (ဥပမာ bot policy) ကို သီးသန့်ချမှတ်ထားတာမျိုးမရှိရင် meta ဖက်က global policy ကို apply လုပ်ပါတယ်။ ဒါကိုလဲ သိရှိနားလည်စေချင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး မူဝါဒရေးရာတွေကို နားလည်သိရှိခြင်းမရှိဘဲ မြန်မာဝီကီကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ အက်ဒမင်လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာ လက်သင့်ခံနိုင်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီစာမျက်နှာရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ ဖော်ပြထားသလို inactive admin ဆိုတာမျိုးကို မဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက် အခုလို ဆွေးနွေးချက် လုပ်ဆောင်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၆:၅၇၊ ၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝီကီပီးဒီးယား:Requests_for_adminship/မော်ကွန်း_၃&oldid=405473" မှ ရယူရန်
၁၃ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၀၇:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၀၇:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။